Home / Interior design / Proposition kanto sy manankarena, mamolavola toerana onenana an-tanàn-dehibe | Drafitra SRDP
2021 / 08 / 14 FisokajianaInterior design 11025 0
Ny famoronana zavakanto dia avy amin'ny tena fiainana ny fiainana. Mba hamolavolana ny tontolon'ny fiainana an-tanàn-dehibe dia ny teny "kalitao" no tokony hatao lohalaharana indrindra. Ny fahafantaran'ny mpamolavola ny lohahevitra an-tanàn-dehibe dia fitambaran'ny fifehezana ny ivelany sy ny fisokafana tsy voafehy.
Mazava be ny hazavan'ny masoandro sy ny natiora ary ny maitso. Rehefa mitondra ny natiora sy ny zavakanto eny amin'ny habakabaka isika dia mahatsapa ny tononkalo amin'ny fiainana andavanandro.
Ny zavatra rehetra dia samy manana ny fiteniny avy. Amin'ny maha ivon-kery maso ny haben'ny habakabaka, ny zava-kanto dia manaitra ny ain'ny habaka. Ny abstraction artistic, exaggeration ary deformation dia mitazona ireo singa fototry ny soavaly sady manatsara ny hery ara-panahy ao anatiny.
Ny olona tsirairay amin'ny fiainana maoderina dia samy manana ny mampiavaka azy manokana sy ny tiany. Ny famolavolana ny habaka dia tsy tokony hoferana amin'ny fomba iray sy fiasa iray fotsiny. Ireo mpamorona dia mikarakara ny filan'ny ara-nofo sy ara-panahy an'ny faribolana an-tanàn-dehibe ankehitriny. Ny foto-kevitry ny famolavolana ny habakabaka ambanin'ny tany dia miaro ny fahamendrehana amin'ny maha diplaoma azy, amin'ny fampiasana ny "hakantony" hampitana ny fanahin'ilay habaka.
Ny habaka ambanin'ny tany dia tsy miantoka ny tsiambaratelon'ireo mpampiasa fotsiny, fa maneho ihany koa ny fisokafan'ny faritra sosialy. Milamina sy tsy manelingelina ny feon'ilay habaka. Io no lamaody nefa tsy marevaka, kanto ary milamina.
Izay fiainana malalaka sy milamina rehetra dia hiverina amin'ny habakabaka ihany amin'ny farany. Sedimentation, fisaintsainana ary fihemorana. Ny antsipirian'ny habaka rehetra dia mitondra kolontsaina, zavakanto, tsiro ary fihetsika eo amin'ny fiainana.
Ny hoditra malefaka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny dia mifanohitra amin'ny hamafin'ny marbra, ary voaravaka kojakoja vita amin'ny volon-koditra. Ahitana taratra ny fahamendrehana sy ny hakanton'ny tokantrano, ny fampiononana eo aloha ary ny haitraitra ao aoriana, amin'ny lokon'ny fotony misy endrika sy ny endrika manankarena.
Ny endriny dia manamaivana ny fetran'ny fiainana. Ny efitrano fandraisam-bahiny misokatra dia mifamatotra amin'ny efitrano fisakafoanana sy lavarangana. Ny fiasa sy ny hatsarana dia ampiarahina eto, ary ny fifandraisana amin'ny fihetsem-pon'ny mpianakavy dia mihalalaka.
Sehatra mahaliana izaitsizy ity. Nanomboka teo dia manana fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny fety, fisakafoanana, fanandramana divay, fivoriambe sns. Io no toerana mety indrindra amin'ny fomba fiaina ara-tsosialy manankarena.
Ny efitrano fisakafoana dia endrika tsara amin'ny fombafomba. Ny takelaka marbra, ny jiro kristaly mahafinaritra ary ny latabatra dia miara-mamorona rivo-piainana manjelanjelatra sy mahafinaritra, mampiseho toe-javatra mafana sy kanto.
Ny faharanitan'ny mpamolavola dia miharihary amin'ny firafitry ny fitaovana, ny fihaonan'ireo faritra, ny fizarana ny tsipika sy ny habeny, ny mari-pana amin'ny jiro ary ny fiovan'ny lokon'ny fanaka.
Ny efitrano fandraisam-bahiny lehibe dia novaina ho zavamananaina mifamatotra ny fampiharana sy ny hatsarana. Ny hafanan'ny loko, ny hazavan'ny tsipika ary ny firafitry ny lamba, atambatra amin'ny hazavana sy jiro kanto, dia miteraka toe-tsaina milamina.
Ny lavarangana ivelany dia toerana iray hamakiana magazine, hihainoana chanson na mozika jazz, ary hankafizanao ny fiainana marefo feno zava-kanto.
Ny loko mavo mavitrika sy manonofinofy ao amin'ny efitran'ilay zazavavy dia misavoana amin'ny faritra rehetra amin'ny habakabaka, miaraka amin'ireo sary hosodoko haingo kanto ao an-habakabaka. Voalamina tsara ny zava-drehetra, mety avy amin'io ny fahasambaran'ny fiainana.
Ny trano dia fitoeran'ny fiainana ary fonenana ho an'ny fanahy. Ny endrika dia manome kalitao ambony mirindra sy mahazo aina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny alàlan'ny fomba miavaka. Miitatra eto ny sisintany eo anelanelan'ny zavakanto sy ny fiainana, manokatra dian-tsiro nefa tsy mihetsika, ary manasongadina ny fihevitry ny olona ambony sy matoky tena ao amin'ny tanàna manankarena.
Anaran'ny tetikasa | Jinmao Jinmao Mansion
Fampahalalana an'ny tompona | Jinmao China
Toerana | Changzhou, Sina
Ekipa mpamorona | Drafitra SRDP
Mpamolavola mitarika | Sheng Yongna Li Yue
Previous :: Simenitra Micro + Rattan, ampiasao ny firafitra hamoronana atmosfera habakabaka | DESIGN HURD Next: Fametrahana zavakanto + singa voajanahary, mitaona sary an-tsaina tsy manam-petra momba ny ho avy | DESIGN MACONWAY
2021 / 08 / 15 10883
2021 / 08 / 15 11201
2021 / 08 / 15 11621
2021 / 08 / 14 12020
2021 / 08 / 14 10643
2021 / 08 / 13 10427